Hubinta Tayada - Saky Steel Co., Ltd.
ahama bar wareega
ahama bar flat
ahama bar square
ahama xagal bar
ahama channel bar
ahama lixgeesle bar
Ahama Steel Profile
ahama biibiile wareega
ahama biibiile welded
ahama biibiile aan xuduud lahayn
ahama biibiile square
tube gaddoonka ahama
Ahama Steel tuuboyinka Gaarka suurawdo
Steel ahama Plate Sheet
Ahama Steel Plate
Ahama Steel Sheet qorxiyey
Ahama Steel gariiradda Strip
ahama silig dhalaalaya
Ahama Steel jilicsan Wire
ahama silig guga
ahama silig yar
ahama silig alxanka
ahama ul silig
ahama profile silig
ahama Xadhig silig
Daawaha Nickle taxane
Tayada waa qayb muhiim ah Mabaadi'da Ganacsiga ee SAKY STEEL. Siyaasadda tayada ayaa na hagta si aan u gaarsiino alaabooyin iyo adeegyo ka sarreeya rajooyinka macaamiisha isla markaana buuxiya dhammaan heerarka. Mabaadi'daani waxay naga caawiyeen inaan helno aqoonsi ah iibiye lagu kalsoon yahay macaamiisha adduunka oo dhan. SAKY STEEL Alaabooyinka waxaa aaminay oo ay doorteen macaamiisha adduunka oo idil. Aaminaadani waxay ku saleysan tahay muuqaalkeenna tayada leh iyo sumcaddeena sida joogtada ah u gaarsiinta alaab tayo sare leh.
Waxaan leenahay heerar tayo adag oo qasab ah oo meesha ka jira oo u hoggaansamida lagu xaqiijinayo iyada oo loo marayo xisaab-celin joogto ah iyo is-qiimeyn iyo kormeer dhinac saddexaad ah (BV ama SGS). Heerarkani waxay xaqiijinayaan inaan soo saarno oo aan soo saarno alaab tayo sare leh oo la jaan qaadaya warshadaha ku habboon iyo heerarka sharciyeynta ee dalalka aan ka shaqeyno.
Waxay kuxirantahay dalabka loogu talagalay iyo xaaladaha gudbinta farsamada ama qeexitaanka macaamiisha, noocyo kaladuwan oo tijaabooyin gaar ah ayaa la qaadi karaa si loo hubiyo in heerarka tayada ugu sareeya la ilaaliyo. Shaqooyinka waxaa lagu qalabeeyay tijaabo lagu kalsoonaan karo iyo qalab cabbiraad oo loogu talagalay tijaabinta burburka iyo burburka.
Dhammaan imtixaannada waxaa qaada shaqaale tayo leh oo tababaran iyadoo la raacayo tilmaamaha nidaamka Hubinta Tayada. Dokumentiga 'Buugga Hubinta Tayada' ayaa dejinaya dhaqanka khuseeya tilmaamahan.
Qaado Tijaabada Spectrum
Fadhiga qalabka muuqaalka
Imtixaanka Isku-dhafka Kiimikada CS
Adag Tijaabinta HB
Adag Tijaabinta HRC
Tijaabinta Isku-qasnaanta Intergranular
509 Edunburgh Tower NO.139 Hengxi Road Degmada Minhang, Shanghai, Shiinaha 201112
Fakis: 0086-21 51026334
Su'aalaha ku saabsan wax soo saarka ama pricelist our, fadlan ka tago aad email noogu iyo waxaan noqon doonaa in la taabto 8 saacadood gudahood.